Nylon yekukanda ndeimwe yeanonyanyo shandiswa epurasitiki epuriniki, kunyanya muchimakanika chinhu senge inopfeka uye inopfeka-yekudzora zvinhu kutsiva simbi dzisingaite sedzemhangura uye maalloys. Iyo 400-kilogiramu yakakanda nylon inogadzira ...
Kambani yedu yakavambwa muna 1974, ndiyo yekutanga bhizinesi renylon muChina. Iyo kambani iri muHuai'an, Jiangsu Province, taundi rekumusha kwePremier Zhou Enlai rine nzvimbo dzinoyevedza. It rakaumbwa muna 1974, kushandisa ...
MC nylon tsvimbo, inozivikanwawo seyakakandirwa nylon tsvimbo, imhando yezvinhu zvakaumbwa zvisingaite, c6h11no, inova yakanyungudutswa mbishi zvinhu, iyo inoshandisa zvinhu zvekutanga sechibatiso. MC nylon tsvimbo uye activator uye zvimwe zvinowedzera zvinogadzirwa kuita monomer kuve po ...